China Nitroxinil Injection 34% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
Initroxinil Injection 34%
Iqukethe ml ngayinye:
I-Nitroxinil: 340 mg.
Isikhombi se-solvents: 1 ml.
Isenzo esikhulu semithi yesithako esisebenzayo kuFluconix-340, nitroxinil, yi-fasciolicidal. Isenzo esibulalayo sokulwa neFasciola hepatica sikhonjisiwe ku-vitro naku-vivo ezilwaneni zaselebhu, nasezimvini nasezinkomeni. Indlela yokusebenza ibangelwa ukuhlanganiswa kwe-phosphorylation ye-oxidative. Isebenza futhi ngokumelene ne-triclabendazole-resistant
I-Fluconix-340 ikhonjisiwe ekwelapheni i-fascioliasis (ukutheleleka kwe-Fasciola hepatica evuthiwe nengavuthiwe) ezinkomeni nasezimvini. Kuyasebenza futhi, ngezinga lomthamo onconywayo, ngokumelene nokuhlaselwa kwabantu abadala kanye nesibungu kweHaemonchus contortus ezinkomeni nasezimvini naseHaemonchus placei, Oesophagostomum radiatum naseBunostomum phlebotomum ezinkomeni.
Ungayisebenzisi ezilwaneni ezine-hypersensitivity eyaziwayo kwisithako esisebenzayo.
Ungasebenzisi ezilwaneni ezikhiqiza ubisi ukuze zidliwe ngabantu.
Ungadluli umthamo oshiwo.
Ukuvuvukala okuncane kuyenzeka ngezikhathi ezithile endaweni yomjovo ezinkomeni. Lokhu kungagwenywa ngokujova umthamo kumasayithi amabili ahlukene nangokumasaja kahle ukusabalalisa isixazululo. Akukho miphumela emibi yesistimu elindelekile lapho izilwane (kubandakanya izinkomo ezimithi nezimvukazi) zelashwa ngomthamo ojwayelekile.
Ukuphatha kanye nesilinganiso
Ngomjovo ongaphansi. Qinisekisa ukuthi umjovo awufaki umsipha ongaphansi. Gqoka amagilavu ​​angenakugwenywa ukugwema ukungcola nokucasula kwesikhumba. Umthamo ojwayelekile yi-10 mg nitroxinil kg ngayinye yesisindo somzimba.
Izimvu: Ukuphatha ngokusho kwesilinganiso esilandelayo:
14 - 20 kg 0.5 ml 41 - 55 kg 1.5 ml
21 - 30 kg 0.75 ml 56 - 75 kg 2.0 ml
31 - 40 kg 1.0 ml> 75 kg 2.5 ml
Ekuqhamukeni kwe-fascioliasis imvu ngayinye emhlambini kufanele ijovwe ngokushesha lapho ukutholakala kwalesi sifo sekuqashelwa, kuphinda ukwelashwa njengoba kudingekile phakathi nesikhathi lapho kwenzeka khona ukuhlaselwa, ngezikhathi ezingekho ngaphansi kwenyanga eyodwa.
Izinkomo: 1.5 ml weFluconix-340 ku-50 kg ngamunye wesisindo somzimba.
Kokubili izilwane ezithelelekile nezithintana nazo kufanele zelashwe, ukwelashwa kuphindaphindwe njengoba kubhekwa njengokudingakalayo, noma kungenjalo kaningi ngenyanga. Izinkomo zobisi kufanele zilashwe lapho zoma (okungenani izinsuku ezingama-28 ngaphambi kokuzala).
Qaphela: Ungasebenzisi ezilwaneni ezikhiqiza ubisi oludliwa ngabantu.
Izinkomo: izinsuku ezingama-60.
Izimvu: izinsuku ezingama-49.
Gcina ngezansi kwama-25ºC, endaweni epholile futhi eyomile, futhi uvikele ekukhanyeni.
Ukusetshenziswa KwezilwaneKodwa, Gcina lapho izingane zingafinyeleleki khona
Langaphambilini Inaliti ye-Multivitamin
Olandelayo: Inaliti ye-Oxytetracycline 5%
I-Lincomycin Hydrochloride Injection 10%
I-Dexamethasone Sodium Phosphate Injection 0.2%
Inaliti yeTylosin Tartrate 20%
Inaliti ye-Florfenicol 20%
I-Procaine Penicillin G ne-Dihydrochloride Sulfa ...
Ivermectin ne-Clorsulon Injection 1% + 10%
Ikheli: IShijiazhuang Xinle Airport Industrial Park